YEYINTNGE(CANADA): Friday, March 15
ကြေးနီတောင် ဒေသခံတွေ ကို လျော်ကြေးငွေပေးဖို့ ပြင်ဆင်
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် နစ်နာခဲ့တဲ့ မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းက လယ်ယာမြေဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၆၄၀၀ ကျော်ကို တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ပေးလျော်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီလျော်ကြေးတွေကို မတ်လ ၁၅ ရက် ဒီကနေ့စတင်ပြီး ပေးလျော်ဖို့ရှိတယ်လို့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အစီရင်ခံစာကို အကောင်အထည်ဖော်မယ့် လုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနက ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးတင်မြင့်က RFA ကို ဒီမနက်ပိုင်းက အတည်ပြု ပြောကြားပါတယ်။
“ကျနော်တို့ အကြမ်းဖျင်းတွက်တာကတော့ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၆၅၁၈ ပေါ့၊ အဓိကကတော့ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ပေးရမှာပေါ့၊ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရဲ့ အကျိုးအမြတ်ထဲကနေပြီးတော့ လယ်သမားတွေနစ်နာတဲ့ မြေယာလျော်ကြေး၊ အဲ့ဒီထဲကမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးတာတွေ ပြန်လုပ်ပေးဖို့၊ မြေကြီးတွေ ပြန်ဖို့ပေးဖို့ကအစ နောက်သစ်ပင်တွေ ပြန်စိုက်ပေးဖို့၊ သောက်သုံးရေတွေ ရရှိရေးကိစ၊္စ နောက် လယ်သမား ယာသမားတွေ ရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီသူတို့ပြောင်းရွှေ့တဲ့အိမ်တွေကို အဆင့်မီပြန်လုပ်ပေးဖို့ သူတို့အတွက်လမ်းတွေဖောက်ပေးဖို့ သောက်သုံးရေရရှိဖို့ အဲဒါတွေအကုန်ပြန်လုပ်ပေးဖို့ကတော့ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက လုပ်ပေးမှာပါ”
ဒီလျော်ကြေးငွေတွေ ပြန်ပေးမယ့်ကိစ္စကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးတို့ ခေါင်းဆောင်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် လုပ်ငန်းကော်မတီဟာ ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းက လယ်သိမ်းခံပြည်သူတွေနဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်မြေဧက ၆၇၈၄ဧက လက်ရှိ ကာလပေါက်ဈေးအတိုင်း ပေးလျော်သွားဖို့ စီစဉ်ထားပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို နားမလည်သေးတဲ့ လက်ပံတောင်းဒေသခံတွေအတွက် အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကိုလည်း မကြာမီဖြန့်ဝေသွားဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ပံတောင်းဒေသခံတွေအတွက် စိုက်ပျိုးမြေဧက ၁၉၀၀ ကျော်ကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ စီးပွားရေးဦးပိုင်နဲ့ တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ ညှိနှိုင်းပြီး ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့လည်းရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/15/2013 1 အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/15/20130အကြံပြုခြင်း
HZ Zane's photo.
တစ်ချိန်တုန်းက ဒီမျက်ဝန်းအစုံဟာ ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့လူကို ကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်…
တစ်ချိန်တုန်းက ဒီမျက်ဝန်းအစုံဟာ ဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ ချုပ်နှောင်မှုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်…
တစ်ချိန်တုန်းက ဒီမျက်ဝန်းအစုံဟာ ကြောက်ရွံ့မှုကင်းမဲ့စေခဲ့တယ်…
တစ်ချိန်တုန်းက ဒီမျက်ဝန်းအစုံဟာ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့လက်ကို တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်…
တစ်ချိန်တုန်းက ဒီမျက်ဝန်းအစုံဟာ အင်အားကြီးမားတဲ့လူတောင် သူ့ကိုလေးစားစေခဲ့တယ်…
တစ်ချိန်တုန်းက ဒီမျက်ဝန်းအစုံဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာဆိုတဲ့ လူမျိုးကို ဂုဏ်ရောင်လွင့်တင်စေခဲ့တယ်…
ဒီမျက်ဝန်းအစုံဟာ သူချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့မှာ ညိုးနွမ်းခဲ့ရတယ်…
ဒီမျက်ဝန်းအစုံ ညိုးနွမ်းခဲ့တာ သူ့ အစီရင်ခံစာကို လက်မခံလို့ မဟုတ်ဘူး…
ဒီမျက်ဝန်းအစုံ မှာ သူတွေ့နေတာ သူ့သားသမီးတွေ ရဲ့ ပူဆာမှုကို အမေဖြစ်သူက ကောင်းကောင်းမဖြည့်ဆီးပေးနိုင်ခဲ့လို့လား…
အမေရဲ့စေတနာကို ပညာရေးရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေခဲ့တဲ့ သားသမီးတွေက နားလည်မှုမပေးနိုင်တာလား…
အမေ့ရှေ့မှာ ငိုကြွေးနေတဲ့ သားသမီးတွေကို သူမြင်နေရတဲ့အခါ သံမဏိ မိန်းမသားလို့ ကမ္ဘာက သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ သူမျက်ဝန်းအစုံမှာ မျက်ရည်တွေလည်ခဲ့ရတယ်…
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ အထက ကျောင်းမီးလောင်းကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွား
၁၆.၃.၂၀၁၃ ရက် နံနက် ၂း၃၀ နာရီ ပတ်ဝန်ကျင်လောက်မှ စတင်ပြီး ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ အထက ကျောင်းကို မီးလောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စာသင်ခန်း (၂)ခန်း မီးထဲကို ပါသွားပြီး မီးငြိမ်းသတ်ရန်အတွက် အခန်း (၁)ခန်း စုစုပေါင်း စာသင်ခန်း (၃)ခန်း မီးထဲကို ပါသွားပါသည်။ ယခုအချိန်သည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (ဆယ်တန်း) ကျောင်းသား/သူများ စာမေးပွဲ စစ်ဆေးနေသော အချိန်အခါလည်း ဖြစ်ပြီး ယခုဆိုလျှင် မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ (၃)ဘာသာကိုသာ စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ မီးလောင်းခဲ့ပုံကို အနီအနားမှ လူတစ်ဦးမှ “ မီးက ဘယ်လို လောင်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ စဉ်စားလို့မရဘူးဗျာ။ အဲဒီ အခမ်းမှာ လူလည်း မနေဘဲ။ မီးထွန်းထားတာလည်း မရှိဘူး။ စာမေးပွဲရာသီးဆိုတော့ ကျောင်းမှာ ကြီးကြပ်ရေးဆရာတွေရယ်၊ အစောင့်ရဲ တွေပဲရှိတာပါ။ ဒါပေမယ် အဲဒီဖက် အခြမ်းက သွားလာတာနည်းတဲ့အပိုင်းပါ။ ဒါပေမယ် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေ စာမေးပွဲရာသီဆိုတော့ ဘယ်လို့ဆက်လုပ်မလဲ မသိဘူး”ဟု ပြောပြသွားပါတယ်။ မီးဘယ်က စလောင်းရသည်ကို မည်သူမျှ မသိရှိဘဲဖြစ်နေရပြီး ကျောင်းကြီးကြပ်ရေးကို စုံစမ်းမေးမြန်ခဲ့သော်လည်း မည်သို့မှ မဖြေကြားခဲ့ပါ။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေသော ကျောင်းသား/သူများသည် တနင်္လာနေ့တွင် ဆက်လက် စာမေးပွဲ ဖြေကြားရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဘယ်လို စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ မသိရှိရသေးဘဲ။ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ အထက ကျောင်းသည် ယခင်း က ယခုလိုမျိုး မီးလောင်းမှု တကြိမ်းတခါမှ မရှိခဲ့ဘဲ ကျောင်းသက် နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော်အတွင်း ဆရာဝန်ပေါင်းမြောက်မြားစွာနှင့် ပညာတတ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အရင်းအမြစ်အတွက်မွေးထုတ်ပေးနေသော ရခိုင်ပြည်သူများ အားကိုးအားထားပြုရသော ကျောင်းတော်ကြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ မီးလောင်းမှုကို သက်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျှက်ရှိပြီး မီးလောင်းမှုဖြစ်ပွားရမှုကို မြို့သူမြို့သားများလည်း စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိပါသည်။ Photo: Oo Kyaw Nyint
လက်ပံတောင်းကိစ္စ လူထုနဲ့ဒေါ်စု သဘောမကွဲသင့်ကြောင်း ကိုမင်းကိုနိုင် အကြံပြုသဘောထား
(ကိုမင်းကိုနိုင် -၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ - ဗွီအိုအေနဲ့ သီးခြားမေးမြန်းမှု)
“ကျနော်တို့က နားလည်မှုအခြေခံနဲ့ ဘာမဆို စဉ်းစားပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီတော့ ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ် ဖြစ်မသွားအောင် ရတောင့်ရခဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခရီးကြမ်းကြီးမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ သူတို့နဲ့အတူ ယုံကြည်လက်တွဲခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေ- ဒီဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မထိခိုက်စေချင်ဘူးဗျာ။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ တော်တော့်ကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုတွေ ရှိတယ်ဗျ။ သဘောထားဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ တူရမယ်လို့ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ၊ မတူတဲ့ကိစ္စတွေ ပေါ်လာပါစေ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြောကြဆိုကြမယ်။ ပြီးရင် ရအောင်ညှိကြမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်အခြေခံနဲ့ ကြိုးစားကြစေချင်တယ်ဗျာ။ လူတွေရဲ့ မြတ်နိုးမှုဆိုတာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်တွေဗျ။ အဲဒါကို ရုပ်ဝတ္ထုတွေနဲ့သွားပြီးတော့ တိုက်ရိုက်လဲမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားလို့တော့ မရဘူး။ အဲဒါမျိုးလည်း သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ခုနက ပြောသလိုပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကို ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ်မိသွားပြီးတော့ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းကြားထဲမှာ ထိခိုက်သွားတာမျိုး တကယ်တော့ ပြည်သူတွေကလည်း မလိုလားပါဘူး။ ကျနော်တို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်းပြီး ခရီးကြမ်းကြီး အတူလျှောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါ။”
“မီးခိုးဗုံးလို့ပဲမြင်မြင်၊ မီးလောင်ဗုံးလို့ပဲ ဆိုဆိုဗျာ။ လူတွေရဲ့ အရေပြားတွေကို မီးလောင်စေခဲ့တယ်ဗျာ။ ရိုးရိုးလူတောင် မဟုတ်ဘူး။ ရဟန်း၊ သံဃာတွေ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က ဒီဟာကို ဂလဲစား ချေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ တောင်းဆိုနေတာ မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်သူတွေ တောင်းဆိုနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဖော်ပြနိုင်စွမ်း တကယ်ရှိဖို့လည်း လိုတယ်။ အဲဒီ အစီရင်ခံစာအပေါ်မှာ သဘောထား ကွဲလွဲကြသည့်တိုင် နောက်နောင်ကို အေးချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမယ့်ပြည်သူတွေဟာ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ရှိနေအုံးမှာပဲ။ အကြောင်းအရာတွေ ပေါ်လာတိုင်း အေးချမ်းစွာ ဆန္ဒပြကြအုံးမှာပဲ။ မီးလောင်စေတဲ့ လက်နက်မျိုးနဲ့ မီးခိုးဗုံးခေါ်ပြီးတော့ မီးလောင်စေတဲ့ လက်နက်မျိုးနဲ့ ပစ်လာခဲ့ရင် ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ ဘယ်နှယ်လုပ်မလဲ၊ အဲလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်သလဲ၊ အဲဒါက နောက်ထပ် ခေါင်းဆောင်တွေရော- သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရော စဉ်းစားပေးကြပါ။ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေဟာ သံသယတွေ၊ နောက်ထပ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ အရင်းခံပြီးတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာလက်တွဲထားတဲ့ တွဲလက်တွေ မပြုတ်စေချင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ပါ- ဒီကိစ္စကို ထပ်ပြီးတော့ လေးနက်ပေးစေချင်ပါတယ်။ တာဝန်ယူဖို့ကို ကျနော် ဆိုလိုပါတယ်။ တာဝန်ယူမှု လိုပါတယ်။”
March 15, 2013 by ရွှေအောင်
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ နဲ့ ကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရေး အရေးကြီးအဆိုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးထဲမှာ ၀က်လက်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် သူရဦးအေးမြင့်က အရေးကြီးအဆို တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးသိန်းဇော်က ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်သဘောတူလိုက်တဲ့ ဒီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီနဲ့ ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရေးတိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထံ သ၀ဏ်လွှာပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကက ကော်မတီနဲ့ ကော်မရှင်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆက်လက်ဖွဲ့စည်း လုပ်ဆောင် သွားဖို့ရှိတယ်လို့ သီပေါမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးရဲထွန်းက ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ သူရဦးအေးမြင့်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရေး အရေးကြီး အဆိုတင်တာ လွှတ်တော်က သဘောတူလိုက်တယ်လို့ သိရတယ်။
“ဟုတ်တယ်။ သူရဦးအေးမြင့်ကနေပြီး အရေးကြီးအဆိုအဖြစ်နဲ့ တင်တာပေ့ါနော်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက အမှန်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင် ၂၀၀၈ က အတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ အတည်ပြုခဲ့တယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအရ စပြီး ကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အခု ၂ နှစ်ကျော်ပဲ ရှိသေးတာ။ ပြောမယ်ဆိုရင် အသစ်ကျပ်ချွတ်ဖွဲ့စည်းပုံလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဖို့ စဉ်းစားလာတယ်ဆိုတာက တချက်က ပြည်တွင်းမှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေး ကိစ္စတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်သေးတဲ့ ကိစ္စတွေကို သူတို့ ဆွေးနွေးကြရင်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ပြင်သင့်တဲ့အပိုင်းတွေ ပါတယ်ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုလို့ ရိုးရိုးသားသား စေတနာထားပြီး သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းက ကောင်းတယ်လို့ ကြိုဆိုရမှာပေါ့။
“ဒါပေမယ့် တဖက်က ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လည်း အသစ်ကျပ်ချွတ်ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကို ပြင်ဖို့ စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ ပြည်သူအားလုံး၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ သဘောဆန္ဒ၊ အများစုကို ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ အတည်ပြုခဲ့တာ ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလား ဆိုတဲ့သံသယကို ၀န်ခံလိုက်ရာ ရောက်သွားတာပေါ့။ ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတယ်၊ သူတို့ရဲ့ ရိုးသားမှုကို ဖော်ပြတာလို့ ခံယူပြီး ကြိုဆိုပါတယ်။”
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရေးအဆိုကို လွှတ်တော်က သဘောတူလိုက်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ ဆောင်ရွက်သွားတယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားမှာလဲ။
“ခန့်မှန်းကြည့်ရတာကတော့ ဒီကော်မတီ၊ ကော်မရှင်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်အနေနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတာမျိုး လုပ်စေချင်တဲ့သဘော ရှိပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ လွှတ်တော် ၂ ရပ်လုံးကို ခြုံငုံပြီး ပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့တာမျိုးဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်ဖွဲ့တာမျိုးပဲ ဖြစ်စေ ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်နိုင်မယ့်သဘောပါ။ ကော်မတီသဘောမျိုး ဖွဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း လွှတ်တော် ၂ ရပ်လုံးက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်နိုင်မှာပေါ့။ ကော်မရှင်ဆိုရင်လည်း လွှတ်တော် ၂ ရပ်လုံးက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင် ပြင်ပပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းပြီးတော့ အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက် လေ့လာဖို့အတွက် ဆပ်ကော်မတီလေးတွေ၊ ဆပ်ကော်မရှင်လေးတွေ ဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ကြမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။”
လွှတ်တော်ပိုင်းကနေပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ ပထမဆုံး စလှမ်းလိုက်တဲ့ ခြေလှမ်းလို့ ပြောလို့ ရမလား။
“လွှတ်တော်ပိုင်းကလို့ ပြောနိုင်သလို အနိုင်ရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ စပြီးလှမ်းလိုက်တဲ့ ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။ သို့သော် ကျနော်သိရသလောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအုပ်စုအသီးသီးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေက တအုပ်စုနဲ့ တအုပ်စု မတူကြဘူး။ ဥပမာ တိုင်းရင်းသားတွေက ပြည်နယ်ရဲ့ ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာနဲ့ အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာနည်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကို တိုင်းရင်းသားတွေက စိတ်ဝင်စားသလို အန်အယ်လ်ဒီကကျတော့လည်း သမ္မတရွေးချယ်ရေး အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကျတော့လည်း သမ္မတက ဥပဒေပြုရေးဖြစ်စဉ်မှာ သူ့ရဲ့ ၀င်ရောက်ပါဝင်နိုင်မှုအခန်းကဏ္ဍက အရမ်းနည်းနေတယ်။ ဆိုလိုတာက အမေရိကန်သမ္မတ တယောက်လို သိပ်ပြီးတော့ သဘောမတူတဲ့ ဥပဒေကို ဗီတိုအာဏာ ကျင့်သုံးခွင့် ကျနော်တို့ လွှတ်တော်မှာမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေးကို အခိုင်အမာဆောင်ရွက်ရတဲ့ သမ္မတက ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ဥပဒေမပြုနိုင်ဘဲနဲ့ လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေပြုမှုအောက်မှာ လိုက်လုပ်နေရသလိုဖြစ်တယ်။ အဲလိုဖြစ်တော့ သမ္မတကပြင်ချင်တဲ့အပိုင်းကလည်း ဥပဒေပြုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပိုင်းမှာပြင်ချင်တာတွေ ရှိလိမ့်မယ်။
“ထိုနည်းအတူပဲ လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အခုရွေးကောက်ပွဲစနစ်အရဆိုရင် ပါတီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ တစညတို့လို၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးလို ပါတီကြီးတွေက လွှတ်တော်ထဲမှာ အမတ်ဦးရေရမယ့် နေရာအချိုးအစား အရမ်းနည်းလိမ့်မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ချင်တဲ့ ပါတီကြီးများထဲမှာလည်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ပါတယ်။ အဲတော့ အဲအစိတ်အပိုင်းကိုလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ပြင်ချင်ပုံရတယ်။ ကျနော်သုံးသပ်တာကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားအလိုက်၊ စိတ်ဝင်စားမှုအလိုက်၊ အပိုင်းလိုက် အပိုင်းလိုက် တအုပ်စုနဲ့တအုပ်စု မတူကြဘူး။ တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့မတူကြဘူး။ အသီးသီး ကွဲကွဲပြားပြားရှိပါတယ်။”
အဲတော့ အသီးသီးကွဲပြားနေတဲ့ဆန္ဒတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီ၊ကော်မရှင်တွေဖွဲ့တဲ့အခါမှာ အင်အားစုတွေ၊ ပါတီတွေအားလုံးက ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကို ထည့်သွင်းပြီး ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားမှာလား။
“ဒါတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ လွှတ်တော်နာယကရဲ့သဘောထားက အဓိကကျပါလိမ့်မယ်။ အဲလို အကျယ်အပြန့်ပါနိုင်အောင်၊ ပညာရှင်တွေလည်းပါနိုင်အောင် ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။”
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ လေ့လာသုံးသပ်တာ၊ ပြင်ဖို့တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်မယ့် သဘောတွေ့ရလား။
“မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်မယ့်သဘောတော့မတွေ့ရဘူး။ ခန့်မှန်းတာတော့ ဒီသက်တမ်း မတိုင်ခင် ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ်အတွင်းမှာတော့ လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ မတိုင်ခင်ပေါ့။ ၂၀၁၅ မတိုင်ခင် ပြင်သင့်တာတွေပြင်ပြီးတော့ အဓိကအားဖြင့် ပြင်သင့်တယ်လို့ အဲဒီကော်မရှင်၊ ကော်မတီအဖွဲ့ခွဲတွေက သုံးသပ်ပေမယ့် အဓိကအားဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြင်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိဖို့။ သူသဘောပေါက်ဖို့က အဓိက အချက်လိုဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းက တယောက်မှ မထောက်ခံရင် အဲပြင်ဆင်ချက်ဟာ အောင်မြင်နိုင်မှာ မဟုတ်လို့ပါ။”
ဆန္ဒပြရန် အချိန်မဟုတ်တော့ကြောင်း မသွဲ့သွဲ့ဝင်းပြောကြား
လူမှုကွန်ယက်၌ ပျံ့နှံ့နေသည့် စွပ်စွဲချက်များအား ဒေါက်တာ နိုင်အောင် ငြင်းဆို
ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ) | သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၁၅ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၁၃ မိနစ်
လက်ပံတောင်းတောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆန္ဒပြခံရပြီးနောက် ၎င်းဆန္ဒပြ မှုကို ချိတ်ဆက်ကာ
လုပ်ဆောင်နေကြသည်ဟု လူမှုကွန်ယက် (Social Media) များတွင် ပျံ့နှံ့လာသည့် အရေးအသားအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ်
အင်အားစု၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ နိုင်အောင်က မိမိ၏ ပုံရိပ် (Image) အားဖျက်သည့် စွပ်စွဲချက်များ ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့က အပြင်က လာတယ်ဆိုတော့ ခေါင်းစဉ်တပ်ရ လွယ်တဲ့ပစ်မှတ် အလွယ် (Easy Target) တွေလေ၊ အရင်တုန်းက သတင်းစာ
ရှင်းလင်းပွဲတွေရှိတယ် မဟုတ်လား၊ တစ်ခုခု ကွဲပြီဆိုလို့ရှိရင် ကိုနိုင်အောင်တို့၊ ကိုမောင်မောင်တို့၊ ကိုမိုးသီးတို့ အဲလို မျိုးပဲပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့
Image ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖျက်တာပါ” ဟု ဒေါက်တာနိုင်အောင် မှ မဇ္ဈိမအား ပြောကြားခဲ့သည်။
“လက်ပံတောင်း ဆန္ဒ ပြမှုတွေကို ဦးဆောင် နေသည့် မသွဲ့သွဲ့ဝင်း နောက်၌ မိုးသီးဇွန်၊ နိုင်အောင်နှင့် ခင်ဥမ္မာတို့ ရှိနေ” ဟုသဘော
သက်ရောက်သည့် အရေးအသားများ လူမှု ကွန်ယက်များတွင် သိသာစွာ ပျံ့နှံ့လာသည်ကို ကိုနိုင်အောင်မှ တုန့်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် မသွဲ့သွဲ့ဝင်းအား ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် (၁၂) ကြိမ်မြောက် အမျိုးသမီး နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲကို တတ်ရောက်ရန်
ဖိတ်ကြားခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲ ထားကာ အခမ်းအနား တစ်ခု၌ မတ်တပ်ရပ်ကာ စကားပြောနေသည့် ဓါတ်ပုံနှင့် ရေးသားချက်အပေါ်လည်း
၎င်းက “မသွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့ ဆိုတာနဲ့ သိလည်း မသိဘူး၊ မြင်လည်း မမြင်ဖူးဘူး၊ အဆက် အသွယ်လည်း မရှိပါဘူးခင်ဗျ၊
ဖေ့ဘွခ်မှာ ပြောပြီး ဓါတ်ပုံတွေ ပြပြီး စွပ်စွဲနေတာလေ အဲဒီလို လာသွားမှန်းတောင် ကျွန်တော်တို့ မသိလိုက်ရဘူး။ ဓါတ်ပုံထဲမှာ
ကျွန်တ်ာတို့ ပါတာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဓါတ်ပုံဟာ ဘယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဘာလုပ်တယ် ကျွန်တော်တို့ မသိဘူး” ဟု ပြောသည်။
အလားတူပင် လက်ပံတောင်း ဆန္ဒပြမှုများကို ဒေါက်တာ နိုင်အောင်တို့နှင့် ဆက်စပ်ကာ ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်
နေသည်ဟု စွပ်စွဲ ခံရသည့် လက်ပံတောင်း ဒေသခံ ဝက်မှေးရွာသူ မသွဲ့သွဲ့ဝင်း မှလည်း ၎င်းကိစ္စကို လုံးဝငြင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
“ဒေါက်တာ နိုင်အောင် ဆိုတာ အခုချိန်ထိ ဖြူသလား၊ မဲသလား ဆိုတာတောင် ကျွန်မ အခုချိန်ထိ တစ်ခါဆို တစ်ခါမှ
မမြင်ဖူးပါဘူး၊ သိလည်းမသိဘူး၊ ဓါတ်ပုံက ပြီးခဲ့တဲ့ (၈) ရက်နေ့ (၃) လပိုင်းတုန်းက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများ
နေ့တုန်းက women exchange ကို သွားတက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံပါ၊ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံကို အဲဒီ တခါပဲ ခရီးစဉ်
သွားဖူးပါတယ်။ အွန်လိုင်းဆိုတာက မလိုတဲ့ လူတွေတင်တားတဲ့ စကားတွေပါ အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့က ဘာမှ
မသိသေးပါဘူး။ ကျွန်မတို့က သပိတ်စခန်း နောက်ကွယ် ကနေ ကြိုးကိုင်ထားတာ ဆိုတာတွေ ဘာတစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။
ကိုမိုးသီးဇွန်ကိုတော့ ကျွန်မတို့ ရွာကိုလာတုန်ကတော့ တစ်ခါ တွေ့ဖူးတယ်သာ ရှိပါတယ်” ဟု မသွဲ့သွဲ့ဝင်းမှ မဇ္ဈိမအား
လက်ရှိ အနေအထားမှာ လက်ပံတောင်း အရေးကိစ္စသည် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စားပွဲဝိုင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်၍
မိမိတို့ဘက်မှ စားပွဲဝိုင်းပေါ်တွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒပြရန် အချိန်မဟုတ်တော့ကြောင်း မသွဲ့သွဲ့ဝင်း
၎င်းစွပ်စွဲချက်သည် မိမိတို့အား ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေရန်ပုံဖော်ကာ စွပ်စွဲချက်သာဖြစ်သည်ဟုလည်းနှစ်ဖက်စလုံးမှ
လက်ပံတောင်းတောင် စုံစမ်းရေးကော်မီရှင်၏ အစီရင်ခံစာ ထွက်လာပြီး ဒေသခံရွာများသို့ သွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့သည့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခရီးစဉ်တွင် ဒေသခံရွာသားများမှ မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနောက် ယခုလို စွပ်စွဲသည့်စာများ
လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ်တွင် လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့လာခြင်း ဖြစ်သည်။
အထွေထွေ မကျေနပ်ချက်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ပုံမချသင့်
The Street View's photo.
‎"အထွေထွေ မကျေနပ်ချက်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ပုံမချသင့်ဟု စာရေးဆရာဦးကျော်ဝင်း သုံးသပ်"
အစီရင်ခံစာကတော့ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ဘက်က နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားတာလို့ မြင်တယ် အခုအခြေအနေမှာ ကော်မရှင်က အကြံပြုတာဟာ အကောင်းဆုံးအဖြေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ယေဘုယျပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ ဘ၀င်ကျတယ်။ လက်ရှိဆန္ဒပြနေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ တောသူတောင်သား ၊တော်သူတောင်သားမှ မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ တွေလည်းအပါအ၀င်ပေါ့ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့်ဓါးမဦးချ လယ်ကို မဆုံးရှုံးချင်ကြဘူးပေါ့ဗျာ။ ဆန္ဒပြခွင့်လည်း ရှိနေတော့ ဆန္ဒပြကြတာဟာ သူဟာနဲ့သူတော့ သဘာဝကျပါတယ်။ သို့သော် တစ်ခုရှိတာက ဆန္ဒပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဘောင်တစ်ခုအတွင်းက ပြနိုင်ကြဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာ နို့မို့ရင် မကောင်းဘူးပေါ့။ နောက်တစ်ခုက အခုဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း သူကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်း ရှိသ၍ ကြိုးစားပြီးတော့ တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားတာပဲ အဲ့ဒါကို သူ့အပေါ် နားလည်ပေးဖို့လိုမယ်။ အဲ့တော့ အထွေထွေ မကျေနပ်ချက် တွေကို သူ့အပေါ်ပုံချတာကတော့ သိပ်သဘာဝမကျဘူးလို့ ထင်တယ် ဒါကတော့ စဉ်းစားစေချင်တယ်
ဓါတ်ပုံအား_ ဆရာဦးကျော်ဝင်း Facebook မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
ဒီလှိုင်း ဂျာနယ်တွင် (ဒေါ်) အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသားသော “ဒီစကား”
သဘောကျ နှစ်ခြိုက်လွန်းမိတာလည်း အပါအ၀င် ၊ အကြောင်း မညီညွတ်သောကြောင့် မဖတ်ရှုခဲ့ရသေးသောသူများ
ဖတ်ရှုနိုင်ရန် စာရိုက်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စာအကျအပေါက်များ သတ်ပုံ မှားယွင်းမှုများပါရှိပါက ကျွန်တော့်ရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။)
ဟိန်း ထိုက် ဈာန်
အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၄၇ ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် ထုတ် ဒီလှိုင်း ဂျာနယ်တွင် (ဒေါ်) အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသားသော “ဒီစကား”
အချိန်တွေ ဘယ်လိုကုန်သွားသလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။ မုံရွာက နောက်ကျပြန်ရောက်ပြီး မအိပ်မီ “ဒီစကား” ရေးတာ မနေ့တနေ့ကပဲလို့ ထင်နေတာ အခုတော့ တစ်ပတ်တောင်ကြာခဲ့ပြီပဲ။ ဒီကြားထဲမှာ အလုပ်တွေကများတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကူးသွားတာတောင် သတိမထားမိပါဘူး။ အချိန်ရဲ့ သဘောတရားနဲ့ အနိစ္စဆိုတဲ့ မတည်မြဲခြင်းသဘောတရားတွေကို တွဲပြီးဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။
ဘာမှ မပြောင်းမလဲရှိနေမယ်ဆိုရင် အချိန်ဆိုတာကို သတ်မှတ်လို့ရပါ့မလား။ ဒါကတော့ သိပ္ပံ ဒသနိကမေးခွန်းဆိုပါတော့။ တရားသဘောကို အခြေခံမယ်ဆိုရင် အနိစ္စဆိုတာ မရှိလို့က အချိန်ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်ရှိပါ့မလား။ မတည်မြဲ အစဉ်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်သာ အချိန်တွေရဲ့ ရွေ့လျောခြင်းကို သိနိုင်တာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်လည်း အနိစ္စလောကကြီးမှာ နေရတဲ့ လူသားတွေ အချိန်ကို တန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်တာပါပဲ။
အချိန်ကို တန်ဖိုးထားပုံနှစ်မျိုးကို လေ့လာကြည့်ချင်ပါတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ အချိန်ကို လေးစားခြင်း၊ အချိန်နဲ့ ပတ်သက်ရင် တိကျခြင်းပါ။ ကျွန်မတို့ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက အချိန်လေးစားဖို့၊ အိမ်မှာကော၊ ကျောင်းမှာပါ သင်ပေးပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ရင် ဘယ်ာလောက်ကြာမလဲဆိုတာကို တွက်တတ်လာပါတယ်။ အခြား ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်နေတဲ့ အစီအစဉ်တွေမှာဆိုရင် အချိန်တိကျရမယ်ဆိုတာ အရိုးစွဲနေတဲ့ ခံယူချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ တစ်ပါးသူကို လေးစားသောအားဖြင့် အတူချိန်းထားတဲ့အတိုင်း အချိန်တိတိကျကျမလုပ်တာဟာ၊ ထိုသူကို မထီမဲ့မြင်လုပ်တယ်လို့ ခံယူပါတယ်။ ချိန်းထားတာထက် စောသွားပြန်ရင်လည်း တစ်ဖက်က အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးသလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်ကို တိတိကျကျထားပြီး လုပ်ကိုင်သင့်တယ်လို့ ကျွန်မက ယူဆတာပါ။ တစ်ခါတလေ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အလုပ်တွေကြောင့် ချိန်းထားတာတွေ နောက်ကျသွားရင် စောင့်နေရတဲ့သူကို အားလည်းနာ၊ လိပ်ပြာလည်း မသန့်ဖြစ်ရပါတယ်။ အချိန်တိကျမှုကို အလေးမထားဘဲ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိသူတွေကို အံ့သြမိပါတယ်။
အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း နောက်တစ်မျိုးကတော့ အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိအောင် သုံးခြင်းပါပဲ။ ပျောက်ပျက်သွားတဲ့ စက္ကန့်၊ မိနစ်တွေဟာ ဗလာနတ္ထိ၊ ပြစရာမရှိမဖြစ်ရအောင်က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီထက်ပိုအရေးကြီးတာကတော့ ပျောက်ကွယ်မြန်တဲ့အချိန်တွေကို အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ မဖြုန်းလိုက်ဖို့ပါပဲ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ အနိစ္စလောကကြီးမှာ ဖြစ်ပြီးကိစ္စတွေ မဖြစ်ခဲ့ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးနေ ဆွေးနေမယ်ဆိုရင် ကုက္ကုစ အကုသိုလ်မြောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်ကို ရှေးရှုပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ကြရမှာပါ။ အခုအချိန်ဟာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက် တန်ဖိုးရှိအောင် သုံးရမယ့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အတိတ်ကရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေပျောက်ကင်းအောင် လုပ်ကြရင်းနဲ့ အနာဂတ်အတွက် အာမခံချက်ပေးနိုင်မယ့် ပစ္စုပ္ပန်ကို တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ခဏ ခဏပြောနေတဲ့ အခက်ခဲဆုံးကာလလို့ဆိုရမယ့် အဝေးကမြင်နေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို အရောက်သွားရမယ့် ခရီးနောက်ဆုံးပိုင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန်ကျော်ဖြတ်ဖို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ ကျွန်မတို့ ဘယ်လောက် ရင့်ကျက်နေပြီလဲဆိုတာကို အစမ်းသပ်ခံရမယ့် အချိန်ပါ။ ရင့်ကျက်သောသူများသည် စောင့်အပ်သောအရာများကို ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ စိတ္တပညာရှင်များက မြင်ပါတယ်။ ရင့်ကျက်တဲ့ သူများဟာ သာမညနဲ့ အဓိက၊ ရေတိုအကျိုးနဲ့ ရေရှည်အကျိုး၊ လုပ်ချင်တာ၊ လုပ်သင့်တာ၊ လုပ်နိုင်တာ စသည်တို့ကို ခွဲခြားသိတတ်မှုလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရင့်ကျက်သူများဟာ စေတနာကို စေတနာနဲ့ တုန့်ပြန်ခြင်း၊ အခွင့်အရေးကို တာဝန်သိစိတ်နဲ့ သုံးခြင်းဆိုတဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့လည်း ပြည့်စုံပါတယ်။ ခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင် ရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာဟာ အခြေအနေတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီး၊ ဒီသုံးသပ်မှုအရ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ယခု ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်က ဘာလဲဆိုရင် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ကျွန်မတို့တွေ အချင်းချင်း၊ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများအကြား၊ အဖွဲ့အစည်းများအကြား၊ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပြည်သူများအကြား၊ ပြည်သူအချင်းချင်းအကြား၊ မုန်းငြိုးအာဃာတတွေ ကင်းစင်သွားပြီး အပြန်အလှန် လေးစားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့သာ ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကြီး ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ ကျွန်မက ပြည်သူ ပြည်သားတိုင်းကို ဆော်သြချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေ အလဟာသ မဖြစ်သွားရအောင် နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း၊ ည မအိပ်မီ (၅) မိနစ်လောက် နက်နက်နဲနဲ သတ္တိရှိရှိနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စမ်းသပ်မေးမြန်းပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နေ့တာအတွင်း အမျိုးသားရင်ကြားစေ့မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရေးအတွက် လုပ်သင့်တာ ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ၊ ရှောင်သင့်တာ ဘာရှောင်ခဲ့သလဲ။ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ထိခိုက်စေမဲ့ အပြုအမူတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တာရှိလား။ ဒီမေးခွန်းတွေကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ အမှန်အတိုင်း မေးဖြေတတ်မယ်၊ မေးဖြေရဲမယ်ဆိုရင် အင်မတန်မှ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ယခုအချိန်အခါကို နိုင်ငံအတွက် ကျွန်မတို့တွေ ရင့်ကျက်စွာနဲ့ သွားနိုင်ကြမှာပါ။
မောင်ဦး၊ ကိုစိုးဝင်း တို့ အမေ နဲ့အတူဝင်ရောက်သွားရာတွင် ရွာသူတဦးရုတ်တရက် သေဆုံး ပြီဟု ဆိုကာ အမေနှင့် လုံခြုံရေး အဖွဲ့ အား
လွယ်အိတ်ထဲမှ ဓားတိုများကိုင်ပြီး လူစု၍ ခင်များတို့ အကုန်လုံးကို သွေးစွန်း တော့မယ်၊ အပြတ်ရှင်းတော့မယ် ဟုကျွန်တော့်အနား ကပ်လာ
ပြီးခြိမ်းခြောက်သူ၊ Internet ပေါ်တွင်ပျံ့ နှံ့ နေသည့်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်သူ သံသယဖြစ်ဖွယ် လူစာရင်းထဲမှ နာမည်ကြီး ခေါင်းဆောင် တဦး၏
မနေ့က အင်မတန်စိတ်မကောင်းလဲဖြစ် ဒေါသလဲဖြစ်ရတယ်။သေသွားတော့မှ အာဇာနည်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး လွမ်းစာတွေ ဖွဲ့တာ လက်မခံဘူး။
သူ ၆၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ အချိန်မရှိပါဘူး။ သူလုပ်နိုင်တုန်းလေးမှာ လက်တွဲနိုင်တာ တွဲပါ။ မတွဲနိုင်ရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး သဘောကွဲပါ။ဝေဖန်ပါ။
ဆွေးနွေးပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မကြိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေး ညစ်လုံးတွေ သတ်လုံးတွေနဲ့တော့ ခါးအောက်ပိုင်း မထိုးနဲ့။
လူကြီးလူကောင်းလို ယှဉ်ပါ။ သူလုပ်တာကို လက်မခံရင် ခင်ဗျားတို့ တခြားရွေးချယ်စရာပေးပါ။ အကုန်လိုက်ဖျက်မယ် ဆန့်ကျင်မယ်ဆိုရင်
စစ်အုပ်စုရဲ့ လူထုလို့ နာမည်တပ်သူတွေက က ဒီစစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက ဒီပဲရင်းမှာဘဲ ၂၀၀၃က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သတ်ဖြတ်ဖို့
ကြိုးစားခဲ့သေးတယ်။ ခုတခါ ဒါမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။ နောက်ကွယ်က မြှောက်ပေးသူတွေရော မနေ့က ရန်ကုန်ကလာတဲ့
သပိတ်သမားတွေရောသိထားသင့်တာက လူထု လူထု ဆိုပြီး လူတအုပ်နဲ့တော့ မခြိန်းခြောက်နဲ့။ ရန်ပြူဖို့ မကြိုးစားနဲ့။
၁၉၉၀ မှာရော ၂၀၁၂ မှာရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တောင်ပြိုကမ်းပြို
နေသန်မောင် မနေ့ကကိုးကားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစကားလေး ပြန်မျှချင်တယ်။
"ဘာလူထုလဲ။ ခင်ဗျားတို့တစ်ယောက်နှစ်ယောက် ထင်တာလုပ်နေတာ လူထုလား။ ကျုပ်သိတယ်။ ဘာလူထုလဲ။
သူ့ နာမည်က ဘထူး၊ ရွှေပြည်သာမှာ နေထိုင်ပါတယ်၊ အစွယ်အပွားတဦးပါ၊
ဓားစာခံနဲ့ တရားခံ (ခင်မမမျိုး)
ခင်မမမျိုး (၁၄၊ ၃၊ ၂၀၁၃)
ယနေ့လွှတ်တော်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (15-3-2013)
by ငရဲ သား (Notes) on Friday, March 15, 2013 at 7:13am
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ အထက ကျောင်းမီးလောင်းကျွမ်းမှု ဖြစ...
လက်ပံတောင်းကိစ္စ လူထုနဲ့ဒေါ်စု သဘောမကွဲသင့်ကြောင်း က...
အထွေထွေ မကျေနပ်ချက်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ...
ဒီလှိုင်း ဂျာနယ်တွင် (ဒေါ်) အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသားသေ...
ယနေ့လွှတ်တော်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါ...